Sary Nahazo Loka Mampiseho Ny Fiainan’ny Vahoaka Teratany Ao Amin’ny Nosy Orchid Ao Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Sary Nahazo Loka Mampiseho Ny Fiainan'ny Vahoaka Teratany Ao Amin'ny Nosy Orchid Ao Taiwan
Voadika ny 19 Mey 2015 5:55 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 日本語, Nederlands, Deutsch, русский, Français, Italiano, English
Voaaro amin'ny zon'ny mpamorona CC BY-NC-ND ity sangan'asan'i Wen-Yen Wang ity.
Nitolona mafy hatry ny ela mba hiarovana ny tokantrano sy ny kolontsain'izy ireo ny olona teratany Tao ao amin'ny Nosy Orchid ao Taiwan satria niova ny tontolo manodidina azy ireo
Tamin'ny 2014, nahazo magazay misokatra maromaro milahatra voalohany ny nosy. Ary tao anatin'ny taona vitsivitsy, nanjary toeram-pizahan-tany malaza noho ny harambatony mahafinaritra sy ny kolontsaina miavaka an'ny vahoaka Taô ny nosy.
Maro no miahiahy fa miteraka fako sy loto bebe kokoa ny fitomboan’isan'ny mpizaha-tany, fa tsy asa sy fidiram-bola. Miantehitra amin'ny jono nentim-paharazana ny vahoaka Taô mba hamelo-tena, saingy tandindon-doza ankehitriny izany fomba fivelomana izany.
Nitsidika tsy tapaka ny nosy i Wen-Yen Wang ary nandrakitra ny tantaran'ny vahoaka Taô tao anaty sary, izay nahazo loka vao haingana tamin'ny sokajy maromaro nandritra ny fifaninanam-pirenena nokarakarain'ny Taiwan News Photograph Study Group. Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo sariny miaraka amin'ny fanoritsoritana.
Amin'ny alina rehefa nihena ny samonta (marées), niditra tao anaty ranomasina ny Mponin'ny Nosy Orchid iray mba hisambotra foza. Nitsambikina ambonin'ny vatohara mainty izy. Nitopatopa matetika eny amin'ireo vato ny onja. Tsy nahita azy nihetsika aho, kanefa efa nahazo foza maromaro teny an-tanany izy. Indraindray izy mitsambikina ao anaty rano mba hitady orana miafina eo anelanelan'ny vato ambanin'ny rano.
Toetra miavaka maneho ny tetezamitan'ny fomba fiaina taloha amin'ny fomba fiaina vaovao tao amin'ny nosy Orchid i Dakaan. Tsy mahay mamaky teny loatra izy satria tsy tia nandeha tany an-tsekoly fony izy mbola ankizy. Na izany aza, malaza toy ny ‘mpanjakan'ny ranomasina’ izy ao amin'ny tanànan'ny mpanjono. Mahafantatra zavatra betsaka momba ny ranomasina izy, ary maro ireo mponin'ny Nosy Orchid manatona azy mba hianatra momba ny fisamborana trondro. Ao amin'ny fiarahamonina Taô nentim-paharazana, ny lehilahy mahasambotra tondro no tena tsara indrindra ho an'ny vehivavy. Na izany aza, mbola tsy manambady i Dakaan amin'izao fotoana izao, satria tsy manome lanja intsony ny fahaizana manjono ny mponin'ny nosy Orchid izay mirotsaka ao anatin ‘ny fiharian-karena ara-bola. Na dia manana fahaizana mampitolagaga amin'ny fisamborana trondro amin'ny tanany miditra any anaty rano aza i Dakan, dia tsy mba afaka mahazo volabe amin'izany. Vokatr'izany, nanomboka nahazo vola fanampiny ao amin'ny nosy lehiben'i Taiwan izy aorian'ny vanim-potoanan'ny fisidinan'ny trondro.
Sangan'asan'i Wen-Yen Wang, zon'ny mpamorona CC BY-NC-ND.
Miditra an-dranomasina vao maraina i Dakann mba hijery ny harato napetrany ao ambanin'ny ranomasina.
Dakaan milomano eo anelanelan'ny harambato sy ny manodidina mba hanangona sifotra hamama.
Dakaan manangona harato feno trondro lehibe am-polony.
Rehefa mametraka harato ao amin'ny fanambanin'ny ranomasina, tsy maintsy mitsoraka mba hahatratra ny 6-metatra halalin'ny ranomasina i Dakaan mba hamikirana ny harato amin'ny vato.
Miady amin'ny horita vao avy nosamboriny i Dakaan eo an-dalana hiakatra hivoaka ny ranomasina..
Mitady trondro miafina ambadiky ny ny harambato mandritra ny fisitrihana amin'ny alina i Dakaan.
Sangan'asan'i Wen-Yen Wang, voaaro amin'ny zon'ny mpamorona CC BY-NC-ND.
Misasa ao amin'ny renirano hampafana ny vatany i Dakaan rehefa avy misitrika an-dranomasina mandritra ny alin'ny ririnina. Tsy mitafy ilay akanjo mando izy na dia tonga aza ny hatsiaka voalohany.
Mitaingina sambo i Dakann hisambotra trondro manidina sy hanjono
Aorian'ny vanim-potoana fisidinan'ny trondro, mankany Taiwan hiasa i Dakaan. Lavitra ny ranomasina, lasa fialam-boliny ny fisakafoanana miaraka amin'ny namana sy ny fihirana
Ity asan'i Wen-Yen Wang ity dia ao ambanin'ny lisansa CC BY-NC-ND.
Lehibe tao amin'ny Nosy Orchid i Awen. Manana magazay mivarotra enta-madinika sy mitantana orinasa mpampanofa môtô izy. Na dia zara raha miditra any an-dranomasina aza izy, dia miahy fatratra ny ranomasina sy ny nosy mihoatra noho ny olona na zavatra hafa. Manahy izy fa mety hanjavona noho ny fandringanana ny tontolo iainana ny tanindrazany mahafinaritra. Nanomboka niasa tamin'ny fanodinana fako izy: mifandray amin'ireo orinasa fanodinana izy, manangona harona feno tavoahangy sy kapoaka, ary mametraka izany amin'ny harona vaovao. Nividy fiara ho amin'ny fanolora-tena bebe kokoa aza izy. Mitondra fiara izy hanangonana ireo harona feno tavoahangy sy kapoaka ary mametraka harona vaovao isaky ny andro vitsivitsy manerana ny nosy. Mba hitehirizana ireo tavoahangy sy kapoaka, nangataka tamin-drainy, izay tsy mankasitraka ny asany, izy mba hanome azy sombin-tany tsara hambolena vomanga sy saonjo, ho toeram-pandevenam-pako. Ahitana saonjo sy vomanga maniry ny sombin-tany hafa, ny azy kosa fako no mitombo eo aminy.
Min-Jun Jiang no lehiben'ny sambo goavana iray ao I-Raraley. Taloha, tantanin'ny fianakaviana ny sambo lehibe fanjonoana ao amin'ny nosy Orchid. Tsy maintsy olo-malaza hajaina manana fianakaviana midadasika ny lehiben'ny sambo. Noho ny fiovana ara-piaraha-monina sy ara-kolontsaina, tsy misy intsony izany karazana fianakaviana mitantana sambo izany. Ary efa antitra avokoa ireo lehiben'ny sambo sasantsasany.
Lahatsoratra mifandray amin'izany: Related articles:
Flying fish season on Orchid Island (Vanim-potoanan'ny fisidinan'ny trondro ao amin'ny Nosy Orchid)
Nuclear waste on Orchid Island ( Fako nokleary ao amin'ny Nosy Orchid)
Indigenous Tao people’s 30 year nuclear ‘nightmare’ (30 taonan'ny “nofy ratsy” noklearin'ny vahoaka teratany Tao)
1 andro izayFilipina
1 herinandro izayShina
1 herinandro izayMyanmar (Birmania)